Mdaxweynihii hore ee Maraykanka Trump oo ka badbaaday maamuus ka xayuubin | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Mdaxweynihii hore ee Maraykanka Trump oo ka badbaaday maamuus ka xayuubin
Golaha Senat-ka ee Mareykanka ayaa Sabtidii dambi ku waayay Donald Trump, dacwaddiisii labaad ee maamuus ka xayuubinta oo laga soo gudbiyo muddo sanad gudihiis ah.
Xubnaha Jamhuuriga ee ee kujira aqalka Senat-ka ayaa is hortaag ku sameeyay in lagu helo madaxweynihii hore inuu door ku lahaa, weerarkii dhimashada dhaliyay ee boqolaal taageerayaashiisa ah ay ku qaadeen dhismaha xarunta golaha sharci dajinta lixda bishii lasoo dhaafay.
Golaha ayaa xilligaasi u fadhiyay ansixinta guushii madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu ka gaaray doorashadii dhacday saddaxda November ee sanadkii lasoo dhaafay.
Codeyntii golaha Senat-ka ee noqotay 57 iyo 43 ayaa ku filnaan weyday inay dhamaystirto tiradii loo baahnaa si Trump loog helo inuu galay dacwaddii lagu soo oogay, kadib shan oo maalmood dhageysigeeda uu ka socday isla xaruntii ay weerareen taageerayaashiisa oo waqtigaasi maqlay hadallo kulkul oo isagu uu jeediyay.
7 kamid ah 50-ka xubnood ee xisbiga Jamhuuriga kaga jira golahaasi ayaa kula biiray Demoqoraadiyiinta in Trump lagu xukumo dacwaddii lagu soo oogay.
Demoqoraadiyiinta ayaa intii dhageysiga dacwadda maamuus ka xayuubinta uu socday soo bandhigay muuqaallo naxdin leh oo muujinaya weerarkii xarunta golaha sharci dajinta ay ku qaadeen taageerayaasha madaxweynihii hore iyagoo sheegay inuu si toos ugu lug lahaa, laakiin qareennadii difaacayay Trump ayaa sheegay in eedaha loo heysto ay yihiin kuwo siyaasadeed.
Previous articleKu-xigeenka xoghayaha warfaafinta ee Aqalka oo is casilay kaddib markii shaqada laga joojiyay, iyadoo lagu eedeeyay inuu u hanjabay gabar weriye ah.
Next articleKu dhawad 7 dhalinyaro Sooamaliyeed oo lagu diley gobolka Eastern Cape ee dalka Koonfur Afrika 24 kii saac ee lasoo dhaafay.
Dagaalyahanada Al Shabaab ayaa saakay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhigyo ciidanka milatariga Soomaaliya ku leeyihiin degmada Owdheegle iyo Deegaanka Bariire ee gobolka...
Ciidamadamada badbaado Qaran oo Gudoomiye u doortay Janaraal Cali Cosoble Caraay...
imaam caan ka ahaa bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo ...
Jabhad ka dagaalanta dalka Itoobiya oo sheegtay inay afduub u haystaan...